एउटा यस्तो जीव जस्ले लगातार १४ घण्टासम्म स*म्भोग गर्न सक्छ – Ujyaalo Patrika
एउटा यस्तो जीव जस्ले लगातार १४ घण्टासम्म स*म्भोग गर्न सक्छ
अस्ट्रेलियामा पाइने मस्र्युपाइल प्रजातिको जीव से’क्स (शारीरिक सम्पर्क)लगत्तै मर्ने गरेको पाइएको छ । त्यहाँको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार वैज्ञानिकले यो जीवलाई लोपोन्मुख जीवको श्रेणीमा राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । वैज्ञानिकहरुको उद्देश्य यो प्रजातिलाई बचाइराख्नु हो ।
२०१३ मा पहिलोपटक यो प्रजातिका जीवको खोजी गरिएको थियो । कालो पुच्छर र फुस्रो रंगवाला शरीर भएको यो जीव ज्यादातर से*क्समा रुचि राख्ने गर्छ । सोही कारण यिनीहरुको ज्यान नै जाने गर्छ भने यसलाई वैज्ञानिकहरुले आ’त्महत्यासँग तुलना समेत गरेको बताइएको छ । यो प्रजातिमा दिनको १४ घण्टासम्म से*क्स गर्ने क्षमता हुन्छ ।
क्विन्सल्याण्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिक एन्ड्रु बेकरका अनुसार से*क्सको एकदमै भोको हुने यो जीव यही कारण जोडी खोज्दै हिँड्ने गर्छ । यसले यिनीहरु निकै थकित हुन्छन् भने नराम्रो प्रभाव समेत पर्छ । कतिपय अवस्थामा त लगातारको से*क्सकै कारण यिनीहरु घा’इते समेत भएका हुन्छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार लगातार से*क्सकै कारण यिनीहरुको शरीरबाट धेरै मात्रामा ह’र्मोन निस्किन्छ । से*क्सको लागि यिनीहरु आफूलाई रोक्न नै सक्दैनन् । यसैले गर्दा यिनीहरुको ज्या’न नै जाने गर्छ ।
एउटै बाख्राको मुल्य ६५ लाख ! मूल्य यति पर्नुको कारण अचम्मको छ .
Next हाम्रो शरीरको कुन अंग फर्फराउँदा के हुन्छ ? जानिराखाै ।